अर्थ – Bihani Online
२१ कार्तिक २०७७ १२:१८ November 6, 2020 bihani
काठमाडौं,कात्तिक,२१-नेपाली बजारमा पहेंलो धातु सुनको मूल्य शुक्रवार बढेको छ ।साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रवार सुनको मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा रू.१ हजारले वृद्धि भएको हो ।नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रवार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला रू.९७ हजार २०० र तेजाबी सुनको मूल्य रू.९६ हजार ७०० मा कारोबार भइरहेको छ । गत बिहीवार सुनको मूल्य बुधवारको कारोबार […]
१६ कार्तिक २०७७ ११:३० November 1, 2020 bihani
काठमाडौं,कार्तिक,१६-नेपाल सरकारले तयार गरेको कृषि विकास रणनीतिमा सघाउने उद्देश्यले विश्व बैंकले नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएको छ । नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास र अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि विश्व बैंकको बोर्ड बैठकले ९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको ‘ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास परियोजना’ स्वीकृत गरेको छ । यो परियोजनाले स्थानीय तहमा रोजगारी […]
काठमाडौं,कात्तिक,१३-गत फागुन १२ गते हकप्रद निष्कासन गर्न स्वीकृति पाएको अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले कात्तिक १४ गतेदेखि ४७ प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले १ बराबर शून्य दशमलव ४७ को अनुपातमा प्रतिशेयर रू. १०० अंकित दरका ५६ लाख ७० हजार कित्ता हकप्रद शेयर मंसिर ४ गतेसम्म निष्कासन गर्न लागेको हो । नियामक निकाय […]
काठमाडौं,कार्तिक,५-विगत वर्षहरूमा दशैंमा पनि बैंकिङ सेवा दिँदै आएका वाणिज्य बैंकहरूले यसपटक ५ दिन बिदा दिने भएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघले मंगलवार सूचना जारी गर्दै कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले कात्तिक ७ गतेदेखि ११ गतेसम्म बैंकका सबै शाखा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएको छ । संघका अनुसार वाणिज्य बैंकका ३ हजार ७०० भन्दा धेरै कर्मचारी […]
काठमाडौं,असोज,१३-गत साताबाट लगातार घटिरहेको सुनको मूल्य मंगलवार बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलवार सुनको मूल्य प्रतितोला रू.९०० ले बढेको हो। महासंघका अनुसार प्रतितोला फाइन गोल्डको मूल्य रू. ९४ हजार २०० र तेजाबी सुनको मूल्य रू. ९३ हजार ७०० कायम भएको छ। यो साता कारोबारको पहिलो दिन आइतवार तोलामा रू. ६०० ले घटेको सुनको मूल्य […]
९ आश्विन २०७७ १३:०५ September 25, 2020 bihani
काठमाडौं,असोज,९-नेपाली बजारमा सुनको मूल्य शुक्रवार बढेको छ।लगातार तीन दिनदेखि घटेको सुनको मूल्य भने सामान्य महँगिएको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रवार सुनको मूल्य तोलामा रू. ८०० ले बढेको छ । जसअनुसार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रू. ९३ हजार ९०० र तेजाबी सुनको मूल्य रू. ९३ हजार ४०० मा कारोबार भइरहेको छ । पछिल्लो […]